भव्य बन्यो रानीपोखरी : औपचारिक उद्घाटनकाे तयारीमा - Demo Khabar
रानीपाखरी पुनर्निर्माण सम्पन्र
भव्य बन्यो रानीपोखरी : औपचारिक उद्घाटनकाे तयारीमा
काठमाडौँ, कात्तिक । औपचारिक उद्घाटनकाे तयारीमा रहेकाे रानीपाखरी पुनर्निर्माण सम्पन्र भएकाे छ । यएसँगै ऐतिहासिक सम्पदा मध्येको एक रानीपोखरीको सुन्दरताबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । केही महिना अघिसम्म एउटा भग्नावशेष जस्तो देखिने रानीपोखरीको स्वरूप यतिबेला कायापलट भएको छ । कञ्चन रानीपोखरीमा दरबार हाइस्कुल, जमल क्षेत्रका उच्च भवनसँगै उत्तरपूर्वमा रहेको घण्टा घरको छवि निकै रमणीय देखिन्छ ।
यसवर्षको तिहारमा रानीपोखरी र बालगोपालेश्वरको मन्दिर नागरिकका लागि खुला गरिने भएको छ । बुधबार यसको औपचारिक उद्घाटन गरिदैछ । यससँगै तिहारमा आम नागरिकका लागि खुला गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सोमबार र मङ्गलबार सरसफाइ र सजावटको काम सकिएपछि रानीपोखरी नागरिकका लागि खुला गर्न तयार हुनेछ । रानीपोखरीमा सोमबार दर्जनौँ कामदार यसलाई अन्तिम रूप दिन खटिएका थिए । रेखदेखकर्ता दोर्ची शेर्पाका अनुसार छुटेको रङ्गरोगन, टालटुलसहित सरसफाइ र बगैँचा सजाउने काम भइरहेको छ । मङ्गलबारदेखि सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुनेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
झण्डै एक सय कामदारको समूहले रानीपोखरीलाई थप चम्काउने काम मङ्गलबार साँझसम्म भ्याउनेछन् । गतवर्षको भदौ अघिसम्म भने भक्तपुरबाट आएका सम्पदा निर्माण गर्ने महिला सहितको टोलीले प्रारम्भिक चरणको काम सकेका थिए । पोखरीका डिलमा बनेका प्राचीन इँटामा रङ्गरोगन र टालटुल गर्न व्यस्त राम श्रेष्ठले चिल्ला, आकर्षक डिलसँगै पर्खालको काम गरिरहेको बताए ।
पहिले आउँदा काम कताबाट सुरु गर्ने जस्तो लागेको थियो, अहिले देख्दा मनै फुरुङ्ग हुन्छ, उनी सुनाउछन ।राजा प्रताप मल्लका पालामा बनेको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वरको मन्दिर र आसपासका संरचना त्यही समयको ढाँचामा निर्माण गरिएको हो । ९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि फरक शैलीको मन्दिर बनेको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पले गर्दा रानीपोखरी भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो । अहिले प्राचीन आकारको स्वरूपमा मन्दिर बनाइएको हो । राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको असामयिक निधन भएपछि शोकाकुल रानीलाई खुसी पार्न वि. सं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण भएको थियो ।
मंगलवार, कार्तिक ४ २०७७०३:३६:५५